केपी अोलीले भने-नेपाली कांग्रेस बैंस सम्झिएर लौरो टेकेर हिंड्ने बुढाबुढी जस्तै हो – Everest Times News
केपी अोलीले भने-नेपाली कांग्रेस बैंस सम्झिएर लौरो टेकेर हिंड्ने बुढाबुढी जस्तै हो
२०७४ असार ११, आईतवार १४:४५
विराटनगर । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले विराटनगरमा चुनावी सभालाइ सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेस लैनो छउन्जेल थुनमा मुख लगाउन जान्ने पार्टी भएको अारोप लगाएका छन् ।
अाइतबार चुनावी सभालाइ सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘ गतवर्ष हामीले तारिणी सञ्चार अभियान भनेर सञ्चालन गर्यौं । नेपाली कांग्रेस लैनो छउन्जेल थुनमा मुख लगाउन जान्दछ । त्यसबाहेक कांग्रेसले केही जानेको छ ? तारिणी सञ्चारग्रामको अहिले हालत के छ ? मैले अस्ती प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेँ । अघि बढाउनुस् भनेँ । हामी यस ठाउँका लागि काम गरिरहेका छौं ।’
एमाले सिंगै देश बनाउने अभिभारा बोकेको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै जनजाति, मधेस विरोधी भनेर हाैवा लगाउनु विपक्षी पार्टीको कमजोरी भएको बताए । उनले भने, ‘मधेसमा २० हजार घर बनाएर यहाँका विपन्न जनतालाई बाँड्ने पार्टी एमाले हो । मधेसका दलितका छोराछोरीलाई मास्टर्स डिग्रीसम्मै निःशुल्क पढाउने भएकाले एमाले मधेसविरोधी ? मिर्गाैला रोगी जनतालाई निःशुल्क डाइग्लोसिस गर्ने बन्दोबस्त गरेकाले एमाले मधेस विरोधी ? उम्मेदवारमा सबैभन्दा बढी जनजाति एमालेकै भएकाले एमाले जनजाति विरोधी ? महिला उम्मेदवार एमालेका अरुका भन्दा बढी भएकाले एमाले महिला विरोधी ? कुन फित्ताले नाप्ने एमालेलाई ?’
एमाले अध्यक्ष अोलीले थपे, ‘नेपाली कांग्रेस बैंस सम्झिएर लौरो टेकेर हिंड्ने बुढाबुढी जस्तै हो । खाली उहिल्यैका कुरा गर्छ । १५ सालमा दुईतिहाई बहुमत ल्याएको कुरा गर्छ । आज कसरी देश बनाउने भन्ने छैन । आज विजय गच्छदारजीले भन्न मिल्दैन । उहाँ पनि सामेल भएको कांग्रेसको सरकारले देशलाई बनाउने कुनै नीति लिएको छ ? देश कसरी बनाउने ? सोच छैन । कांग्रेसले लोकतन्त्रको कसरी हुर्मत लिइरहेको छ ? सवैलाई थाहै छ ।’